Fitakiana amin’i Frantsa: hiverina an-databatra ny dinika momba ireo Nosy malagasy | NewsMada
Fitakiana amin’i Frantsa: hiverina an-databatra ny dinika momba ireo Nosy malagasy
Manomboka mitsiry indray ny fanantenana ? Nambaran’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Rajoelina Patrick, omaly, fa hiverina tsy ho ela, hotohizana ny dinika eo amin’ny vaomieran’ny firenena roa tonta : Frantsy sy i Madagasikara.
“Iarahana manapaka ny fotoana handinihina ny famerenana amintsika ireo Nosy manodidina”, hoy izy tetsy Anosy, nihaona tamin’ny mpanao gazety. Nikatso ny dinika noho ny Covid-19 raha tokony ho nitohy tany Frantsa izany ny taona 2020. Teo anelanelan’izany anefa, nanambara ny fanjakana frantsay fa hatao faritra ara-boanajahary tantanin’izy ireo ny Nosy Sambatra. Teo koa ny efa nilazan’ny filoha Frantsay, Emmanuel Macron fa “Frantsa eto” raha nitsidika io Nosy io ny tenany tamin’izany. Andrasana indray izany ny mety ho tohin’ny dinika.
Ankoatra ireo, nambaran’ny minisitra ireo drafi-pandaharan’asa miisa efatra lehibe eo amin’ny minisitera, hanatanterahana ny veliranon’ny filoha sy hanamafisana ny ezaka ataon’ny governemanta, tarihin’ny praiminisitra, amin’ny fampamirapiratana an’i Madagasikara eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. « Fanatsarana ny diplaomasia ara-toekarena, fanomezana tanjaka eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, fanamafisana ny fifandraisana amin’ireo malagasy am-pielezana, ary ny ady amin’ny kolikoly”, hoy izy.
Fiandrianam-pirenena sy harem-pirenena
Nasongadiny koa fa mitohy hatrany ny fanatanterahana ireo dingana sy tetikasa hanamafisana ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ireo firenena any ivelany, ho fitsinjovana ny seha-piharian’ny Malagasy tsy ankavanaka, sy ireo orinasa maro eto Madagasikara. Notsindriny fa mitana ny laharam-pahamehana hatrany ireo ezaka ataon’ny minisitera ho famerenana ny hasin’ ny fiandrianam-pirenena. “Eo ny fiarovana ireo harem-pirenena : ireo Nosy malagasy, ireo harena an-kibon’ny tany. Toy izany koa ny fanamafisana ny fiarovana ny zon’ireo teratany malagasy, amin’ny alalan’ny ady atao amin’ny fanondranana olona an-tsokosoko”, hoy ihany izy. Hahazo vahana ihany koa ny fampandrosoana sy ny fanampiana tosika ny seha-piharian’ny tanora amin’ny hametrahana ny akademia hanovozam-pahalalana eo amin’ny lafiny ara-diplaomatika, hananana lalan-tsaina vaovao hatrany hanomezana tanjaka sy hampiroboroboana ny diplaomasia ara-toekarena.